Afrikaan Kibbaa Gadda Keessa Jirti
Aark Bishoop Deezmoond Tuttuu umrii isaanii 90tti Dilbata kaleessaa du’an eega boqotanii booda, sirnii awwaala isaanii Sambata dhufu hanga rawwatamuutti, Afrikaan Kibbaa torban gaddaa keessa jirti.
Gayyaa guyyaatti walakeessa guyyaa ykn waaree irratti waldaa seent Joorj isa magaala Keeptaawoon jiru irraa, daqiiqaa 10f sagaleen qillifamuu kan dhaga’amu yoo ta’u gadda itti dhaga’amee kan itti ibsanii fi galmeen keessumootaaf qophaa’ee kaateedraala sana keessa ka’amee jira.
Dezmoond Tuttuu qabsa’aa farra sirna Apaartaayid akkasumas injifataa waa’ee dhimmi mirga dhala namaa jedhamuun badhaasa Noobeel kan nagaa kan argatan yoo ta’u, Jimaata dhufu reeffii isaanii kaateedraala keessa jimaata dhufu ka’ama.
Du’a Deezmoon Tuttuu kana prezidaantii Afrikaa Kibbaa kan ta’an Raamaafosaatu Dilbata kaleessaa labse.
Prezidaantiin Yunaaytis Isteetes Joo Baaydin fi haatii warraa isaanii, nama dhugumaan waaqayyoo fi uummata tajaajiilan lammiin Afrikaa Kibbaa Aark bishoop Desmond Tutu du’uun isaanii nu gaddisisee jira jechuun ibsa baasan.
Abbaa amantii kana waliin wagoota dheeraa keessatti yeroo eebbaifamaa qabaanneerra jedhanii, jajjabinaa fi hamileen qaban ifa ta’uun, imaammata Amerikaan mootummaa cunqursaa Apaartaayidiif qabdu jijjirsisee jedhan Baaydiin.